Akpụkpọ ụkwụ 9 kacha mma na-erubere $ 100 - Ejiji
Akpụkpọ ụkwụ 9 kacha mma na-agba ọsọ n'okpuru $ 100, Yabụ I Nwere Ike akhapụ Ihe Ndekọ Onwe Gị, Ọ Bụghị Ego Gị
O nweghi ihe o mere ma ị na-akụ okporo ụzọ ụbọchị ise n’izu maọbụ na ị mechaala njem mbụ gị, ịkwesịrị ịnwe ezigbo akpụkpọ ụkwụ. Nke ahụ kwuru, ịkwesighi ịdọnye ụda ego iji nweta sneaker dị mma. Inkpụrụ dị na nke a: stylesdị nkwanye ugwu itoolu ndị a nwere ike ịnara gị ọzụzụ maka 5 Thanksgiving na-ekele gị niile site na ịkwadebe maka marathon mbụ gị, ọ nweghị nke ga-agbaji akụ. Gụọ maka 9 kasị mma na-agba ọsọ akpụkpọ ụkwụ n'okpuru $ 100.
Njikọ: Etu ị ga-esi banye na-agba ọsọ, dị ka onye nchịkwa, Marathoner na Total Newbie si kwuo
1. New Balance Fresh ụfụfụ Roav
Akpụkpọ ụkwụ a na-agagharị agagharị nke nwere ụzọ dị mfe nke kachasị mma maka ụzọ dị mkpumkpu (ikekwe kilomita isii ma ọ bụ obere), ọ bụ ezie na aha ụfụfụ aha na midsole na-enye akwa mkpuchi maka ụbọchị ije, ije ozi ma ọ bụ naanị ịnọ n'ụkwụ gị. Ọ bụ ezie na ụfọdụ ndị ọgba ọsọ hụrụ nkwonkwo ụkwụ dị elu, nke na-enye ntakịrị nkwado nkwado, ndị ọzọ hụrụ na ọ na-ehichapụ ha n'ụzọ na-ezighi ezi, n'ụzọ nkịtị. Socks na-abịa elu, na-etolite ihe mgbochi n’etiti akpụkpọ gị na akpụkpọ ụkwụ gị kwesịrị inye aka mebie ihe ndị a (na-enweghị mmerụ ọ bụla). Otu ihe ị ga-ahụ: Achọpụtala m na ọtụtụ ụdị New Balance na-agba ọkara ọkara karịa ụdị ndị ọzọ, yabụ ị nwere ike ịtụle ịtụle.
Brooks agba ọsọ
Anyị nwere ike ikwu maka akpụkpọ ụkwụ na-agba ọsọ, mana Revel 3 bụ nhọrọ kachasị mma maka ndị na-achọ ịgbanwe ihe n'etiti ebuli igwe na mgbatị ahụ otu ụbọchị, mgbatị mgbatị na egwu na-esote na jog gburugburu ogige ahụ. ụbọchị mgbe nke ahụ gasịrị. Yep, nke a bụ akpụkpọ ụkwụ na-enweghị atụ. Midsole dị nro na-enye ihe karịrị nkwado zuru oke maka ndị nwere etiti toro ogologo, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị na-atụ anya ịgba ọsọ ogologo (sịnụ, 10 kilomita ma ọ bụ karịa), anyị na-atụ aro ka ị họrọ ụdị nke nwere ihe mkpuchi ọzọ.
Zụta ya ($ 100;$ 80)
Ọ bụrụ na ị na-atụ anya akpụkpọ ụkwụ nke nwere ike iburu gị site na ọzụzụ 5K ruo ọkara marathon prep, lee ya. Asdị Asics a na-enye ndị ọzọ cushioning karịa nhọrọ abụọ dị n'elu, ọkachasị na azụ ụkwụ. N'ezie, ọtụtụ ndị nyocha kwuru na ikiri ụkwụ cushy nyere aka belata ma ọ bụ wepụ ihe mgbu nke osisi fasciitis na-akpata mgbe ha na-agba ọsọ. Ọ bụ ezie na GEL-Pulse na-enye ụfọdụ nkwụsi ike, a haziri ya maka ndị na-anọghị na-akpọ pronation, (yabụ, ụkwụ gị anaghị agbagharị ma ọ bụ pụọ mgbe ị na-agba ọsọ), yabụ ọ gaghị akpọchi ụkwụ gị na ebe dịka akwa nkwụsi ike. Nke a bụ ezigbo akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ ma ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịgba ọsọ dịgasị iche na ọnwa ole na ole sochirinụ.
4. Skechers GORun Dị Ọcha 2
Ọ bụrụ na ị naghị akpakọrịta Skechers na nnukwu arụmọrụ na-agba ọsọ akpụkpọ ụkwụ, oge eruola ka ị chegharịa. O nwere ike ịbụ na ị hụrụrịrị ụdị nyiwe ya n'anya '90s, mana Skechers amalitela ọtụtụ ụdị asọmpi na-agba ọsọ n'ezie, nke akụkụ nke marathoner Meb Keflezighi na-edu, nke debanyere aha ahụ mgbe ọ hapụchara Nike na 2011. GORun Pure bụ nhọrọ dị oke egwu maka ndị agbụrụ ha na-agbadata n'etiti 5K na 15K (oge ọ bụla ị ga-achọ ka ndị na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke ọma). Ndị nlebanye anya na-ama jijiji banyere otu akpụkpọ ụkwụ ndị a na-agba ọsọ si dị mma, ma n'okpuru ụkwụ ma n'akụkụ nke elu, yana obere oge ezumike chọrọ.
Chọpụta, ị nwere ike ịpị ma dobe onye kụrụ $ 250 na Nike's ZoomX Vaporfly NEXT%, aka akpụkpọ ụkwụ Eliud Kipchoge yi imebi akara aka abuo na marathon, mana na ọtụtụ nnukwu nhọrọ n'okpuru $ 100, anyị ga-eji obi ụtọ chekwaa ego ọzọ maka ihe ọzọ. N'ihi na ndị na-ahọrọ mkpumkpu anya, na sleek Free RN bụ ma incredibly ọma na-enye magburu onwe ibiaghachi, otú i nwere ike n'ezie dị nnọọ sere ha na-echefu banyere ha. Elu na ire bụcha otu (emebere ka ọ dị ka akụkụ abụọ na-adịkarị elu), nke pụtara na enweghi ohere ire na-amị amị ma ọ bụ na-ete ihe dị ka maịl anọ. Ebe nrụọrụ Nike na-achọpụta ụdị a na-agba obere, yabụ chee na ị ga-eji ọkara ma ọ bụ ọbụna zuru oke.
Zụta ya ($ 100;$ 70)
6. Nike Na-Eme Ọsọ
Ọzọ dị egwu- $ 100 nhọrọ si Nike bụ Renew Run. Nwere ike ịga n'ihu karịa 5K na ndị a n'ihi ụfụfụ ụfụfụ nke na-enye ọtụtụ nkwụsị maka egwuregwu kwa ụbọchị. Ọ bụ ezie na ọ na-egosi ụdị a na-echekwa na ọ na-agba obere (na-arịgo ọkara ọkara ka akwadoro), nke kachasị elu na-acha ọkụ ma na-agbanwe agbanwe, na-enyekwu ohere na igbe mkpịsị ụkwụ. Ndụmọdụ anyị: Jiri sọks toro ogologo maka ịgba ọsọ ole na ole iji gbochie nkwonkwo ụkwụ dị elu na-enye gị ọnya.
Zụrụ ya ($ 90; $ 68)
Ndị a bịara na nkwenye nke onye bụbu onye na-agba ọsọ egwuregwu na ngalaba nke na-eyi ụdị ejiji a afọ 12. Nke a bụ ihe onye nchịkwa m kwuru ka m yikwasị mgbe mbụ m bidoro, na anaghị m ele anya n’azụ. N'ezie, ọ naghị afụ ụfụ na enwere m ike ịhụ ha mgbe niile maka ọnụ ala, ọ gwara anyị. N'ezie, GT 2000 na-enye nnukwu nkwụsi ike maka ụkwụ na-anọpụ iche na nke na-adịghị efe efe, nnukwu ego maka ndị ọgba ọsọ ọhụrụ nwere ike ịnwe ike ọzụzụ ọzọ na ndị na-akụ n'okporo ụzọ ugboro ise ma ọ bụ isii n'izu. Nnukwu uju mmiri nke gel na-eme ka ụkwụ gị sie ike na ụkwụ 13 ga-adị ka ọ ga-adị na kilomita atọ. Ngosipụta zuru ezu: nsụgharị kachasị ọhụrụ nke GT 2000 na-erekwa maka $ 120, mana enwere ike ịchọta ụdị okenye n'oge $ 100.
Zụta ya ($ 120;$ 96)
8. New Balance FuelCell ikwughachi
Ebumnuche nke FuelCell midsole bụ inye gị ike ịlaghachi azụ nwere ike iji ụkwụ ọ bụla na-aga n’ihu, e wuru ya iji nyere gị aka ịgba ọsọ ọsọ ọsọ ma nwetakwu ọsọ ọ bụla. Ọ na-enyere na ikwughachi bụkwa incredibly fechaa, ya mere na ị fọrọ ichefu akpụkpọ ụkwụ bụ ọbụna n'ebe (ihe ịrịba ama nke a zuru okè na-agba ọsọ akpụkpọ ụkwụ, na uche anyị). Ọ bụ ezie na ọmarịcha mmetụ ahụ mmetụta na mmiri agbakwunyere na nzọ ụkwụ gị nwere ike ime ka ọ dị gị ka ị ga-agba ọsọ ma gbaa ọsọ ma gbaa ọsọ ruo ọtụtụ awa, ị ga-enwerịrị ike ịgafe akara gị na akara 10 ma ọ bụ opekata mpe karịa ọkara marathon.
9. Reebok Forever Floatride Ike 2
Yiri nke FuelCell Echo, ụdị Reebok a nwere ezigbo midsole iji weta nkwụghachi ahụ ọzọ maka ọsọ gị. Naanị naanị ounces 7.3, ọ dịkwa ọkụ karịa ọtụtụ akpụkpọ ụkwụ na ndepụta a. Ndị na-enyocha ihe na-amasịkwa otú akpụkpọ ụkwụ ahụ si rụọ ọrụ nke ọma maka ịgba ọsọ na-eweli ma na-eweli dị ka ha mere n'okporo ụzọ. Dịkwa ka Asics GEL-Pulse 11, nke a bụ nnukwu akpụkpọ ụkwụ maka ndị mbido na-ejighị n'aka kpamkpam anya ha chọrọ ikpuchi ma ọ bụ ọkwa kwụsie ike ha chọrọ. Otú ọ dị, ọ dịkwa mma maka ndị na-agba ọsọ na-enweghị mmasị na-ahọrọ akpụkpọ ụkwụ na-anọpụ iche kpamkpam.
Njikọ: Ntuziaka kachasị na ihe niile ịchọrọ iji malite ịgba ọsọ mgbe niile
esi gbochie ntutu ada ada
etemeete ọnọdụ ịgba ụlọ ahịa ọgwụ
prince felix nke denmark
ndepụta nke ụmụaka Hollywood
esi ewepu abụba afọ site na mmega ahụ